ရွေးနှုတ်ထားသောအသက်တာ - Worldwide ဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2020-02 > ရွေးနှုတ်ခြင်းဘဝ
ယေရှု၏နောက်လိုက်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းဟူသည် အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ယေရှု၌ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော ရွေးနှုတ်သောအသက်တာ၌ မျှဝေခြင်းဟူသည် အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများကို ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာဖြင့် စစ်မှန်သော၊ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်နေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ တမန်တော်ပေါလုက ဤသို့ထပ်ဆင့်ပြောခဲ့သည်– “သင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည် ဘုရားသခင်ထံမှရရှိသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဗိမာန်ဖြစ်သည်ကို သင်တို့မသိကြသလော။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့ကို အဘိုးနှင့်ဝယ်၍၊ ထို့ကြောင့် သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ဂုဏ်တင်တော်မူပါ။"1. ကောရိန္သု 6,19-20) ။
Jesus hat uns durch sein Erlösungswerk freigekauft und uns als sein Eigentum erworben. Nachdem wir diese Wahrheit bekräftigt haben durch den Glauben Jesu Christi, ermahnt uns Paulus, diese Wahrheit, das von Sündenschuld erlöste neue Leben zu leben. Der Apostel Petrus warnte, dass es falsche Lehrer geben wird: «Heimtückisch werden sie sektiererische Lehren in Umlauf bringen, die ins Verderben führen, und werden sich damit von dem Herrn und Herrscher lossagen, der sie sich zum Eigentum erkauft hat» (2. ဓာတ်ဆီ 2,1). Zum Glück haben diese Irrlehrer absolut keine Macht, die Realität rückgängig zu machen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. «Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken» (Titus 2,14). Diese Reinigung, die von Jesus durch den fortwährenden Dienst des Heiligen Geistes kommt, befähigt uns, das erlöste Leben in Jesus Christus zu leben.
Petrus erklärt: «Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes» (1. ဓာတ်ဆီ 1,18-19) ။
ဤအသိပညာကယေရှု၏လူ့ဇာတိ၏အရေးပါမှုကိုအပြည့်အဝနားလည်စေသည်။ ဘုရားသခင်၏ထာဝရသားတော်သည်ငါတို့၏လူ့သဘောသဘာဝကိုယူပြီးလူ့ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိလာပြီး၎င်းသည်သူသည်ပြောင်းလဲပြီးယခု ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဝေငှသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားရွေးနုတ်ထားသောအသက်တာကိုအမှန်တကယ်အသက်ရှင်ရန်ကူညီပေးသည်။
သခင်ယေရှုအားဖြင့်ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးသည်လူသားတို့အတွက်ဘုရားသခင့်အစီအစဉ်၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်“ အထက်မှမွေးဖွားခြင်း” သည်သခင်ယေရှုလုပ်ဆောင်ခဲ့သောသန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောရွေးနုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
«Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig – nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit – durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unsern Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben» (Titus 3,4-7) ။
ကျွနု်ပ်တို့၏စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှု၏လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်စားသုံးနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏သားမြေး၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခမည်းတော်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ အစောပိုင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖခင်များကဤသို့ဆိုထားသည် -“ ဇာတိအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်လာသောယေရှုသည်လူသားဖြစ်လျက်၊ ငါတို့သည်ဇာတိပကတိအားဖြင့်သားဖြစ်ကြ၏။ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏။
Wenn wir uns dem Werk Jesu und des Heiligen Geistes hingeben und unser Leben ihm übergeben, werden wir in ein neues Leben geboren, das bereits in der Menschlichkeit Jesu für uns erarbeitet wurde. Diese Neugeburt führt uns nicht nur im rechtlichen Sinne in die Familie Gottes ein, sondern durch unsere spirituelle Wiedergeburt teilen wir Christi eigene Menschlichkeit. Wir tun dies durch den fortwährenden Dienst des Heiligen Geistes. Paulus hat es so ausgedrückt: «Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden» (2. ကောရိန္သု 5,17).
In Christus werden wir neu geschaffen und bekommen eine neue Identität. Wenn wir den Dienst des innewohnenden Geistes empfangen und auf ihn antworten, werden wir von oben geboren. Wir werden so zu Kindern Gottes, die durch den Heiligen Geist an Christi eigener Menschlichkeit teilhaben. Hier ist, wie Johannes es in seinem Evangelium geschrieben hat: «Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott» (Johannes 1,12-13 HFA)။
Indem wir von oben geboren werden und als Kinder Gottes angenommen sind, können wir die neue, versöhnte Beziehung zu Gott, das erlöste Leben in Christus leben. Was Jesus für uns als Sohn Gottes und Menschensohn getan hat, wirkt in uns, so dass wir durch die Gnade in unserem Seinszustand zu Kindern Gottes werden. Gott ist derjenige, der die Gläubigen in diese erneuerte Beziehung mit sich selbst versetzt - in eine Beziehung, die uns bis zu den Wurzeln unseres Seins beeinflusst. So formulierte Paulus diese erstaunliche Wahrheit: «Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater! Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind» (Römer 8,15-16) ။
ဤသည်အမှန်တရား, ရွေးနှုတ်တော်မူအသက်တာ၏အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ခမည်းတော်၏သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူ၏ဘုန်းကျက်သရေနှင့်ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုဂုဏ်ပြုကြပါစို့။